Tore ahịa ka Ebumnuche, Ọ bụghị Anya Anya | Martech Zone
Tozụ ahịa na Ebumnuche, Ọ bụghị Anya Anya
Wenezdee, Jenụwarị 28, 2009 Friday, December 6, 2013 Douglas Karr
Old akwụkwọ ahịa dị ka mgbe niile ga-esi nghọta-na-na ọnụ ọgụgụ nke anya anya. M na-abụkarị nchekwa data na onye na-ere ahịa ozugbo, yabụ enwere m mmasị ịnweta ya nri anya n'anya kama ịkwanye mgbasa ozi n'ihu ha niile.
Ndị ọchụnta ego dị ka ibe akwụkwọ edo edo na-achọ igosipụta ọnụ ọgụgụ buru ibu, kwa. M na-agụ otu ugboro na 87% nke ọnụọgụ ndị US jiri Yellow Pages na 2007. Mgbe ị na-agụ mbipụta dị mma, echere ya site na nyocha ekwentị. Enwere ọtụtụ ajụjụ achọrọ ịjụ mgbe mmadụ tụbara nnukwu nọmba na ịchọrọ gị, dị ka:
Kedu oge nyocha ekwentị emere?
Gịnị bụ ọnọdụ igwe mmadụ ndị e nyochara?
Ugboro ole ka agbanwere site na Yellow Page ojiji?
Kedụ nkezi nke nkwụghachi na ntinye ego maka onye mgbasa ozi Yellow Page?
Olee ụdị mmadụ ndị ahụ ruru? Ọ dakọtara ọnụ ụlọ ọrụ ndị ụlọ ọrụ m lekwasịrị anya?
Gịnị bụ nkọwa nke -ABỤ?
Ileghara ọnụ ọgụgụ buru ibu anya, ihe akwụkwọ edo edo nwere maka ya bụ nzube. Mgbe onye ọrụ mepere Yellow Pages, ha nọ na ozi na ozi ahụ ga-eduga na njikọ aka na onye mgbasa ozi ahụ.
Ngwunye ọchụchọ na-enye ụfọdụ n'ime ike nzube. Ọ bụrụ na m na-achọ “kacha mma mp3 ọkpụkpọ”, Ohere inweta bụ na m na-aga inyocha na-emecha ịzụta ihe m na-achọ. Nke a bụ ya mere ọtụtụ azụmahịa na-ede blọgụ - iji nye ngwaahịa na ọrụ ha nnukwu ntinye igwe maka igwe okwu maka etu ndị ahịa na azụmaahịa si achọ ha.
Peeji Yellow Peeji (IYP) dị obere. Akwụkwọ ndekọ aha azụmaahịa ndị a gosipụtara ma ntinye igwe nchọta na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu. Nkwenkwe m bụ na IYP na-atụgharị ikike maka ndu iji jikọọ azụmahịa gị n'ihi na ha nwere:
Họrọ saịtị gị site na ndekọ na
Nyagharịa gị na saịtị
Mgbe ịzụrụ maka itinye na IYP, ị na-ahapụ IYP ka ọ bụrụ onye nwe ya na ọnụ ụzọ azụmaahịa gị karịa weebụsaịtị nke gị. Na mgbakwunye, onye nyocha ahụ enweghị ike ịme naanị Search, ala na tọghata - ha nwere ịnyagharịa ndekọ. Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na azụmaahịa na-efunahụ ntụgharị site na ịpị 1 pịa tere aka.
ewere nzube n'ime echiche, ọ bụghị ọnụ ọgụgụ buru ibu, azụmahịa kwesịrị inwe obi abụọ banyere netwọkụ mmekọrịta, kwa. Ahụrụ m ọtụtụ ndị folks na-ekwu okwu banyere inweta azụmaahịa site na Facebook. Enweghị m obi abụọ na enwere ohere maka azụmahịa ebe ahụ; ma enwere m obi abụọ dịka ndị ọbịa nzube iji zụọ ihe.
Na nkenke, zere mkpuchi ahụ ma bute ụzọ itinye aka n'ịzụ ahịa ịntanetị ebe ebumnuche na ohere kachasị:
Malite na ntinye ntinye nke igwe nyocha - site na ịchekwa ụlọ ahịa gị n'ịntanetị ma ọ bụ iburu ụlọ ọrụ ịde blọgụ.
Mepụta ọdịnaya ahụ site na ndị na-ajụ ọhaneze ndị ọzọ.
Na-arụ ọrụ na upsell na njigide atụmatụ ndị na-etinye email Marketing na Mobile Marketing.
Tags: nku anyanzubeechiche
Jenụwarị 28, 2009 na 11:59 PM
Isiokwu ahụ ekwughị kpọmkwem, mana m ga-adị njikere ịkụ nzọ na nyocha a kpuchitere naanị ekwentị. O doro anya na ọ na-ewepụ ụdị ndị anaghị enwe telefon ụlọ ma ọ bụ na ha achọghị itinye ụdị nyocha ndị ahụ. Echere m na nke ahụ gbanwere njedebe nke nyocha ahụ.
Ekwenyere m na gị James. Enwere m oge niile banyere 'nyocha ekwentị' ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na igwe mmadụ dị n'ịntanetị enweghị ụlọ ekwentị, azaghị ekwentị ha, ma ọ bụ na ha na-arụ ọrụ n'oge awa a mechara nyocha ahụ.
Jenụwarị 29, 2009 na 12:12 PM
Echere m na m nwere ike ịza ajụjụ gị gbasara usoro eji eme nyocha ekwentị ekwentị.
A na-agba ajụjụ ọnụ kwa ụbọchị n’afọ ma e wezụga Afọ Ọhụrụ, Ekele na ekeresimesi.
Ntughari uche nke ejiri mee bu oku onu ogugu nke putara na akara ekwentị ọ bụla nwere ohere nha nke a hoputara maka nyocha a. Usoro a na-ebute ihe nlele nke enwere ike ịbelata ndị okenye US niile.
86% nke ndị kwuru na ha zoro aka na ibe edo edo kwuru na ha azụlarị ma ọ bụ na-ezube ime ya.
The nkezi nloghachi na ego si obodo ngosi mgbasa ozi bụ $ 13 nke revenue maka ọ bụla $ 1 nke ego.
N'ihi otu esi eme nnyocha ahụ, profaịlụ igwe mmadụ ruru enyo ndị okenye US. Typicaldị Yellow Pages na-eme ihe dị ka 25-49, grad kọleji, HH ego> $ 60K, ọnụ ọgụgụ ezinụlọ> 4, Ebugara ugboro 3 + n'afọ gara aga, ma biri n'ebe ha dị ugbu a n'okpuru otu afọ.
Nkọwa nke onye ọrụ bụ onye mepere ndekọ ma lelee otu ma ọ bụ karịa mgbasa ozi.
Jenụwarị 29, 2009 na 12:19 PM
Chaị - ekele maka nkọwapụta na nke a Larry!
Ekwenyere m. Anyị achọpụtala na nke a yiri ebe a na Ozi atzụ ahịa Ozi. Inweta njide nke ohere ịntanetị bụ ụzọ ị ga-aga. Heck Ọbụna m nwere blog nke m na usoro ahụ. Lelee ya: http://infomarketingstarter.blogspot.com/